Ngo-1973 I-US Open Open Tournament: I-Miller ya-63 e-Oakmont
Ngowe-1973 i-US Open yenye yezona zithenketho ezidumileyo kwiimbali zegalufa-kakhulu idume ukuba zonke iincwadi zibhalwa malunga nesi siganeko esisodwa-ngokubonga kakhulu, kuJohnny Miller . Yilapho uMiller edutshulwa khona umgca wakhe wokugqibela 63, umjikelezo wokuqala we-63 kwimbali yamagosa obukhulu, ukuphumelela umdlalo.
Umninimzi: UJohnny Miller, 279
Imihla: Juni 14-17, 1973
Ikhosi yeGalofu: I-Club ye-Oakmont Country
US Vula inombolo: Eli lixesha le-73 lebhola lebhola.
Johnny Miller's Magic Round ngo-1973 US Open
Enye yezona ndawo zidumileyo zegalufa ziye zadlala - ngokuqinisekileyo iindawo ezibalaseleyo ziye zadlala kwiqhawe lobungcali - yaguqulwa nguMiller kwinqanaba lokugqibela lika-1973 i-US Open. Ngomhla xa iigaluli ezine kuphela zaqhekeza 70 kwi-Oakmont Country Club enzima kakhulu, uMiller waphupha u-63, ephuma kwiintsimbi ezithandathu ezikhokelayo ekuqaleni kwelanga ukuya kutsho.
Kwakuyindoda yokuqala yokuqala engama-63 eyathunyelwa kwi- US Open- okanye nayiphi na enye yezobugcisa obuphezulu, ngenxa yolu hlobo.
UMiller waqala ujikelezo wokugqibela kwiindawo ezili-12, emva kokuqala ngomhla oqala ngo- Arnold Palmer oneminyaka engama-43 ubudala njengenye yeenkokheli ezine kunye noJulius Boros (oneminyaka engama-53 ubudala), uJerry Heard noJohn Schlee.
UMiller wayenombini ophumeleleyo we-PGA Tour kuphela xa wayeqala usuku, kodwa wayemakwe ngobukhulu - omnye wabadlali abakhulu bezitye kwi-tour, kwaye umntu ophethe ezine eziphezulu ezigqibeleleyo ezigqibeleleyo kwiiminyaka emibili edlulileyo.
Wagqiba isithandathu kwi-Masters ka-1973 iinyanga ezimbalwa ngaphambili.
Umjikelezo kaMiller waqala malunga neyure ngaphambi kokuba iinkokeli zikhishwe. Ukhetho lwakhe lwaloo suku lwwenzeka kwinqanaba lesibhozo. Kodwa emva koko, uMiller ubuyekezela amabhunge kwiimingxuma ezine ezilandelayo. UMiller wayebophelele ukukhokela emva komhla we-14, kwaye wayekhokela nge-birdie ngomhla we-15.
Wagqiba ujikelezo ngokukhupha i-birdie putt ngomhla we-18 onokumnika i-62.
Emva koko uMiller walinda ukubona ukuba ngaba-5-ngaphantsi kwe-279 iyonke iya kubamba. Yenza.
I-Palmer yayisaboshelwe ukukhokela kude iqhube i-12, 13 neyi-14 imingxuma, kwaye inxephelene kunye noJack Nicklaus (ovale nge-68 kodwa engazange abe yingozi ngosuku lokugqibela) no- Lee Trevino wesine.
UBoros noHeard, iinkokeli zentsebenziswano ekuqaleni kwemini, zatshaya i-73 kwaye ziboshwe nge sixhenxe.
NguSkylee noTom Weiskopf kuphela - owathi waqalisa usuku olulodwa lokukhangela - wayenethuba lokubamba uMiller, kodwa awakwazi ukwenza izidumbu ezifunekayo (nangona zombini zibethe kakuhle i-70s, kwaye uSchlee wacelwa ukuba angene kwi-18 ukuya ku-tie Miller).
Isihluthulelo sokuba uMiller, njengoko kwakunjalo kuyo yonke imisebenzi yakhe, wayeyidlala yensimbi. Ubethe yonke imifuno eyi-18, kunye neendlela ezintlanu ezisezantsi ngaphakathi kweenyawo zithandathu kunye ne-10 ngaphakathi kweenyawo ezili-15, ngokwembali ye-USGA.
Kuze kube namhlanje, uMiller wa-63 uboshwe kuphela, akalokothi athathwe, kwaye usaqhubeka njengemqhudelwano. Kwaye akukho enye i-golfer ebalulekileyo kwimbali yobuncwane yabaninzi iMiller's 63 kuze kube yowokuqala 62 yadutshulwa nguBrendan Grace ngo-2017 eBritish Open.
Ngo-1973 I-US Open Golf Tournament Scores
Iziphumo ezivela kwi-1973 US Open golf tournament yadlala kwi-71 yase-Oakmont Country Club e-Oakmont, ePennsylvania (i-amateur):
UJohnny Miller 71-69-76-63--279 $ 35,000
John Schlee 73-70-67-70--280 $ 18,000
Tom Weiskopf 73-69-69-70--281 $ 13,000
Lee Trevino 70-72-70-70--282 $ 9,000
Arnold Palmer 71-71-68-72--282 $ 9,000
UJack Nicklaus 71-69-74-68--282 $ 9,000
UJulius Boros 73-69-68-73--283 $ 6,000
Jerry Heard 74-70-66-73--283 $ 6,000
Lanny Wadkins 74-69-75-65--283 $ 6,000
Jim Colbert 70-68-74-72--284 $ 4,000
Bob Charles 71-69-72-74--286 $ 3,500
Gary Player 67-70-77-73--287 $ 3,000
Al Geiberger 73-72-71-72--288 $ 2,333
Larry Ziegler 73-74-69-72--288 $ 2,333
URalph Johnston 71-73-76-68--288 $ 2,333
URaymond Floyd 70-73-75-71--289 $ 1,900
-Vinny Giles 74-69-74-73--290
Gene Littler 71-74-70-76--291 $ 1,775
Rocky Thompson 73-71-71-76--291 $ 1,775
UDenny Lyons 72-74-75-72--293 $ 1,600
Hale Irwin 73-74-75-71--293 $ 1,600
Rod Funseth 75-74-70-74--293 $ 1,600
UBobby Nichols 75-71-74-73--293 $ 1,600
Bob Murphy 77-70-75-71--293 $ 1,600
Bert Yancey 73-70-75-76--294 $ 1,382
Tom Shaw 73-71-74-76--294 $ 1,382
U-Frank Beard 74-75-68-77--294 $ 1,382
Miller Barber 74-71-71-78--294 $ 1,382
UCharles Coody 74-74-73-74--295 $ 1,212
John Mahaffey 74-72-74-75--295 $ 1,212
Chi Chi Rodriguez 75-71-75-74--295 $ 1,212
Sam Snead 75-74-73-73--295 $ 1,212
Don Bies 77-73-73-72--295 $ 1,212
Bob Erickson 73-74-76-73--296 $ 1,110
Larry Wise 74-73-76-73--296 $ 1,110
George Archer 76-73-74-73--296 $ 1,110
Bud Allin 78-67-74-77--296 $ 1,110
Gene Borek 77-65-80-75--297 $ 1,060
Deane Beman 73-75-75-75--298 $ 1,000
Cesar Sanudo 75-73-76-74--298 $ 1,000
UPaul Moran 75-74-76-73--298 $ 1,000
Mac Hunter Jr. 77-73-72-76--298 $ 1,000
UBilly Ziobro 77-69-77-75--298 $ 1,000
Dave Stockton 77-73-77-71--298 $ 1,000
Grier Jones 73-76-76-74--299 $ 930
Joe Campbell 74-76-74-75--299 $ 930
URoger Ginsberg 74-75-73-77--299 $ 930
Umdala weLee 72-77-78-72--299 $ 930
Wall Wall Jr. 73-77-71-78--299 $ 930
UTommy Aaron 78-71-72-78--299 $ 930
I-Forrest Fezler 78-69-80-72--299 $ 930
Butch Baird 75-74-75-76--300 $ 880
Tony Jacklin T 75-75-73-77--300 $ 880
Larry Wood 79-71-76-74--300 $ 880
Chris Blocker 73-76-78-74--301 $ 855
UDavid Glenz 76-74-71-80--301 $ 855
uGary Koch 74-74-79-75-302
UDavid Graham 73-77-77-76-303 $ 820
KaYohane 72-74-78-79-303 $ 820
Bob Goalby 72-77-79-75-303 $ 820
Jim Jamieson 74-76-79-74-303 $ 820
John Lister 76-74-80-73-303 $ 820
Greg Powers 79-70-77-79--305 $ 800
Tom Joyce 78-70-81-76-305 $ 800
George Bayer 72-77-82-79--310 $ 800
Ukuza nokuya kwi-1973 US Open
U-Sam Snead , edlala i-US Vula okokuqala ngqa ukususela ngo-1970, wagqiba ukubopha okanye i-29 kwiminyaka engama-61. Wadlala ii-US kuphela ezimbini Uvula emva koko, kwaye ngulo lo wokugqibela apho uSnead wenza khona. I-US Open iyona kuphela i-Snead enkulu ayizange iphumelele.
UTony Jacklin, ngowe-1970 i-US Open field, wabuye wanqunyulwa kulo mqhudelwano ngexesha lokugqibela, kwaye wabuye wadlala ngokuphindwe kabini emva koko. IJacklin iboshwe kwindawo engama-59.
UGary Koch, umqhubi wePGA ozayo weThafa kwaye kamva eyaziwa ngokuba ngumsasazo wegalufa, edlalwa kwi-US yakhe yokuqala kwaye eyokuqala enkulu apha. Wagqiba u 57.
2019 uMongameli weNdebe
Ingaba u-Augusta kaZwelonke unokuthenga ngePro Shop?
Ukuvakalisa iiNgxube ezinzima zeSpanish
Konke malunga neCloning
Indlela yo kuPhatha
AmaSikh Baby Names Ukuqala kunye noL
Liyintoni na amatyala kaZwelonke?